Uganda: Jaariyad si xun u jirdishay gabar 18 biloood jir ah oo maxkamad lasoo taagay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Gabar u dhalatay dalka Uganada oo lagu magacaabo Jolly Tamuhirwe oo aheyd Jaariyad ayaa maanta la soo taagay Maxkamad ku taal magaalada Kampala, iyadoo lagu eedeeyey iney inay si xun u garaacday oo u jirdishay gabar 18-bilood jir ah oo ay heysay.
Jolly Tamuhirwe oo 22-jir ah ayaa laga yaabaa inay muteysato xabsi 15 sano ah, haddii lagu helo dambiga lagu soo eedeeyey ee ah iney ku xadgudubtay caruur.
Haweeneyda oo laga duubay filim qarsoodi ah oo lagu xiray meel ka mid ah qolka fadhiga ayaa kasoo muuqatay Video la soo dhigay baraha bulshada, iyadoo aad u garaaceysa oo weliba haraatineysa, kana soo soo tuureysa meel ay ku sugneyd.
Haweeneyda ayaa sidii ay u jirdileysay gabarta yar gaarsiisay iney suuxdo, waxeyna sidoo kale filimka kasoo muuqatay iyadoo sida gabarta uu suuxsan, arrintaas oo argagax iyo walaac ku reebtay dad badan.
Aabaha dhalay gabadha yar oo lagu magacaabo Eric Kamanzi ayaa Kaamirada qarsoon ugu xiray qeybta sare ee qolka fadhiga, kadib markii uu ogaaday in Jaariyada ay mar walba garaacdo gabadha yar ee uu dhalay.
Muuqaalka ayaa dad badan ka careysiiyay, markii haweeneyday ay gabadha yar si xun u jirdishay, iyadoo garaacis iyo laad kala daashay, waxaana Garsoorayaasha ay sheegeen in labo maalmood dib loo dhigay maxkamadeynteeda.
Garsooraha Maxkamada ayaa haweeneyda weydiistay inay raali gelin ka bixiso falkii jiridilka ah ee ay kula kacday gabadha yar.